Soomaaliya oo taageertay howlgalka millatari ee uu Turkigu ka waddo gobolka Afrin ee dalka Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya oo taageertay howlgalka millatari ee uu Turkigu ka waddo gobolka Afrin ee dalka Suuriya
January 27, 2018 Abdi Omar Bile Somalia 0
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa taageertay howlgalka millatari ee uu Turkigu ka waddo gobolka Afrin ee kuyaala waqooyiga-galbeed ee dalka Suuriya, sida ay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu kasoo xigatay Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya.
Axmed Ciise Cawad ayaa Anadolu u sheegay in dalkiisu uu taageersanyahay howlgalkaas.
“Waxaanu taageersanahay howlgalka millatari ee uu Turkigu ka bilaabay Afrin,” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
“Turkigu xaq bay u leeyihiin in ay is difaacaan, waxaan la hadlay Wasiirka Arrimaha Dibada Turkiga Mevlut Cavusoglu waxaana u sheegay in Soomaaliya ay taageersantahay,” ayuu ku sii daray.
Turkiga ayaa asbuucii lasoo dhaafay howlgal millatari ka bilaabay gobolka Afrin si ay halkaas uga saaraan maleeshiyooyinka PYD/PKK iyo Daacish.
Turkiga ayaa Soomaaliya taageerayay tan iyo sanadkii 2011, waxaana uu dalka kuyaala Geeska Afrika ka dhistay saldhigiisa milatari ee ugu weyn adduunka, iyo safaarada ugu balaaran caalamka.
December 12, 2017 Khabiir miino saarista ah oo katirsanaa ciidamada Puntland oo ku dhintay qarax miino oo ka dhacay Buuraha Galgala
About Abdi Omar Bile	717 Articles
Somalia’s President called on the international community to lift an arms embargo on his country
Somalia’s president has called on the international community to lift an arms embargo on his country because Somali forces need more weapons to increase fighting against Al-Shabab militants. Speaking on Thursday at a Somalia conference [...]